Tag: ku noqo maalgashiga suuq geynta | Martech Zone
Tag: ku noqo maalgashiga suuq geynta
Sabti, Noofembar 16, 2019 Sabti, Noofembar 16, 2019 Douglas Karr
Waxaan la wadaagnay faahfaahin ku saabsan waxa suuqgeynta saameyntu tahay, isbeddelka suuqgeynta saamaynta ka hor, iyo sidoo kale maqaallo aad u fara badan oo ku saabsan suuqgeynta saamaynta hababka ugu wanaagsan, sida aan loo adeegsan kuwa wax gala, iyo farqiga u dhexeeya saamaynta yar iyo caan. Faahfaahintani waxay faahfaahin ka bixineysaa muuqaalka guud ee suuqgeynta saameynta leh iyo istiraatiijiyadda hadda iyo tirakoobka dhammaan dhexdhexaadiyaasha iyo kanaalada. Dadka waawayn ee 'SmallBizGenius' waxay diyaariyeen macluumaad guud oo dhammaystiran oo bixiya xaalad cad oo suuq-geyn saamayn ku leh maanta, Under
Khamiis, Juun 20, 2013 Khamiis, Juun 20, 2013 Douglas Karr
Waxaan shalay yeelanay laba kulan oo cajiib ah, mid macmiil iyo mid rajo leh. Labada wada hadalba waxay ahaayeen qiyaastii filashooyinka ku soo noqoshada maalgashiga suuq geynta. Shirkaddii ugu horreysay waxay inta badan ahayd urur wax iibiya dibadda iyo tan labaadna waxay ahayd urur ballaadhan oo inta badan ku tiirsan suuqgeynta keydka xogta iyo jawaab celinta tooska ah ee boostada. Labada hay'adoodba way fahmeen, illaa doolarka, sida miisaaniyaddooda iibka iyo miisaaniyadda suuqgeynta ay ugu shaqeynayaan iyaga. Ururka iibku wuu fahmay taas, oo leh
Axad, Disembar 13, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Anigu waxaan ahay taageere weyn oo bixiya adeegga iimaylka iyo alaabada iyo adeegyada cajiibka ah ee ay bixiyaan. Waxaa laga yaabaa in ugu muhiimsani ay tahay arrimaha gudbinta ee soo bixi kara markii la dirayo tiro emayl ah. Khilaafka baaxadda leh ee u dhexeeya Bixiyeyaasha Adeegga Internetka (ISPs) iyo Bixiyeyaasha Adeegga Emailka (ESPs), mararka qaarkood ganacsiga ayaa dhexda la geliyaa. Waxaase la yaab leh, la shaqeynta ESP iyo yeelasho la'aan wax awood ah waxay sababi kartaa arrimo la soo dhoweyn karo, sidoo kale. Qaar badan oo ka mid ah ISPs ayaa xannibi emaylka si fudud sababtoo ah